🥇 ▷ Ku duub fiidiyowyada sida xirfadlaha ah iPhocus kuna guuleysta laysan BILAASH ah ✅
Ku duub fiidiyowyada sida xirfadlaha ah iPhocus kuna guuleysta laysan BILAASH ah
La kulan iPhocus iPhone codsiga oo hel lambar bilaash ah oo xayeysiis ah
Farqiga dhabta ah ee u dhexeeya duubista tayada leh iyo duubista otomaatigga ah ayaa ah in xirfad yaqaanku had iyo jeer kugu hagi doono aragtidaada meel kasta oo uu doonayo, isagoo kuu oggolaanaya inaad raacdid sheekada qaabkiisa. Mid ka mid ah astaamaha isugu yimaada inay adiga xakameeyaan waa diiradda, maxaa yeelay tan waxaan ku eegnaa aragtideena marwalba waxay tagtaa halka shayga diiradda lagu saarayo. Miyaad dooneysaa inaad ku duubto fiidiyowyo sida pro ah oo leh iPhone? Nagala soo qaybgal barnaamijka iPhocus iPhone oo ka qaybqaado isku darka shanta lambar ee xayeysiinta.
Awoodda si go’aan ka gaadh meesha aad xoogga saareyso kamaradda iPhone Waa mid ka mid ah kontaroolada gacanta lagu marin karo aaladda macruufka, maadaama ugu badnaan aan riixi karno meesha xoogga la saarayo oo aan wax ka bedelno sida aan wax u duubno, laakiin ma xakameyneyno muuqaalka.
Codsiga iPhocus Waxay la macaamilayso awood ku siinta inaad gacanta ku hayso cajaladaha fiidiyowgaaga ee iPhone-ka.
Astaamaha IPhocus ee qalabka ‘iOS’
Buugga tilmaanta (F). Kaliya maaha inaad diirada saari karto, ama khafiifin kartid, sida aad xiiseyneyso, laakiin sidoo kale waad ciyaari kartaa inaad beddesho waxa diirada lagu saaray waxa loogu yeero “kala duwanTaasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad qeexdo bilowga iyo dhamaadka focal dhererka diyaaradda aad qaadaneyso.
Bandhigga (EV), waxay magdhaw ka bixisaa tirada faahfaahinta aad ku arki karto xaaladaha iftiinka ama hooska.
Isku dheelitirka cad (WB), kaameeradu had iyo jeer si otomaatig ah ayey u sameysaa laakiin waxay badanaa siiyaan kiisaska sawirro oranji maxaa yeelay waxay u fahmeen sidii midab cad. Si lagaaga caawiyo inaad haysato abtirsiin laakiin aad sidoo kale ku ciyaari karto xulashooyinka heerkulka Y dheeh.
ISOQiimahaas waxaad kaameeradda ka dhigi kartaa mid aad u nugul iftiinka iyo meeleynta tirooyin aad u sarreeya, aad u hesho iftiin badan, helitaanka sawirro jilicsan oo aan lahayn “qaylada” caadiga ah ee dhacda markaan iftiimino muuqaal mugdi ah.
Haddii aad bilaabayso inaad gacanta ku haysato kamaradda, ha argagixin, Codsigan wuxuu ku siinayaa ikhtiyaarka awood u lahaanshaha inaad ku aragto waxaad ku samayn lahayd hab otomaatig ah, waad kaheli kartaa adoo riixaya Manual menu ama adigoo gujinaya badhanka mugga. Sidan ayaad markaa riixi kartaa shaashadda si aad diiradda u saarto isla markaana soo-gaadhista tooska ah iyo xisaabinta isu-dheellitirka cad loo soo bandhigi doono.
Nidaamyadu waxay kuu oggolaanayaan inaad magac u bixisid mashruuca, qeexiddiisa qaraarka kaas oo aad rabto inaad duubo fiidiyowga ku saabsan iPhone (Xusuusnow inaadan u baahnayn HD), u beddelo xarkaha halkii labaad (FPS) oo geli duubista fiidiyaha at mooshin gaabis ah Qiimaha 120 ama 240 FPS.
Ugu dambeyntiina waxay leedahay howsha Diiradda hawada, taas oo ah hab lagu duubo iPhone-ka iyada oo lagu xakameynayo mid kale oo isla Wi-Fi ah, oo ah kontaroolada fog ee ugu dhameystiran.
U soo degso iPhocus iPhone iyo iPad
Haddii aadan sabir lahayn oo aadan sugi karin kulanka ku-soo boodda ah kala soo bax iPhocus qalabkaaga (iPhone, iPad), waxaad ku rakibi kartaa arjigan adoo isticmaalaya xiriiriyaha tooska ee soo degsashada, ka App Store, kaas oo aad ka heli doonto hoosta. Haddii aadan waxbo ka qabin sugitaanka, waxaad arki kartaa hoos sida aad uga qaybqaadan karto kulankayaga si aan ugu guuleysanno lambar xayeysiinta iPhocus.
Sida loogu guuleysto koodh xayeysiinta iPhocus loogu talagalay iPhone iyo iPad
Haddii aad rabto inaad isku daydo inaad noqoto duubista fiidiyowga xirfadda leh, TodoiPhone.net waxaan kusiineynaa 5 shati ama koodhadhka xayeysiinta ah ee barnaamijka iPhocus, liisamadaan ayaa la furi doonaa bisha soo socota ee Janaayo 7deeda Ka mid ah taageerayaasheena twitter-ka kuwaas oo iyaguna soo bandhiga faallooyinka boostada isla markaana ku xusaya twitter-ka hashtag #TodoiPhoneMola. Waxaad gelin kartaa shay sida:
Waxaan kaqeyb galayaa isbadalka koodhka xayeysiinta ee barnaamijka si aan ugu duubto fiidiyowyada iPhocus ee loogu talagalay iPhone iyo iPad ee #TodoiPhoneMola
Xusuusnow in ay lagama maarmaan tahay in nala soo raaco twitter-ka iyada oo loo marayo koontada rasmiga ah ee badhanka aad ka heli doonto hoosta:
La soco @all_iPhone
Nasiib wacan dhamaan kaqeyb galayaasha Codsiga iPhocus wuxuu isku dayaa inuu ku duubo fiidiyowyo xirfad leh oo leh iPhone iyo iPad.